Dowlada Kenya oo Codsatay in dib loo dhigo dhageysiga Dacwada Bada ee Maxkamada ICJ – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dowlada Kenya oo Codsatay in dib loo dhigo dhageysiga Dacwada Bada ee...
Dowlada Kenya oo Codsatay in dib loo dhigo dhageysiga Dacwada Bada ee Maxkamada ICJ
Dowladda Kenya ayaa dalbatay in dib loo dhigo Dacwadda Badda ee kala dhaxeysa Soomaaliya oo lagu waddo in ay furanto 9 Bishaan, waxaana dowladda Kenya ay Warqad u dirtay Maxkamadda ICJ.
Paul Kihara oo ah xeer-ilaaliyaha guud ee dalka Kenya ayaa Warqad u diray Maxkamadda Caalamiga ee ICJ waxaana uu dalbaday in la hakiyo dhageysiga Dacwadda ilaa Amar dambe oo kasoo baxaya dowladda Kenya.
Waxaa uu ku sheegay sababtu ay tahay in dowladda Kenya ay dooneyso inay qorato koox cusub oo ah qareeno difaaca, sidaas darteedna ay u baahan tahay waqti dheeri ah.
Waxaa uu sheegay in 9 bishaan ilaa 13 aysan dowladda kenya aysan tagi karin Maxkamadda Duruufo kala duwan oo heysta owgeed.
dhanka wargeysyada kenaya ayaa yaguna qoraya sidan
Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa Kenya ayaa qoray in dowladda Kenya ay si rasmi ah u dalbatay in la hakiyo dhageysiga kiiska dacwadda badda ee kala dhaxeya Soomaaliya, kaasi oo la qorsheeyey in la dhageysto Isniinta soo sococta.
Kenya ayaa codsigeeda qiil uga dhigtay inay dooneyso in la siiyo waqti ay ku qoroto qareeno cusub.
Dhinaca kale, warar diblomaasiyeed ee laga helayo dowladda Soomaaliya ay diiday in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda.
Dhageysiga dacwada ayaa waxaa qorshuhu yahay inay dhacdo 9-ka illaa 13-ka bishan oo ku beegan Isniin illaa Jimce.
Previous articleWhatsapp Oo Bilaabay Adeeg Suurtagelinayo In Hal Mar Dad Badan Wax Loo Diro, Mid Kasta Gaarkiisa
Next articleRW Khayre oo bilaabay xalinta beelo muddo dheer dagaalamayay +Sawirro
Guddiga Wanaag Farista Somaliland Oo Bulshadda Uga Digay In Loo Dabaal-dego...
Madaxweynaha jabuuti Geele oo u duuley cumaan